Banaynta dariiqa aaminaadda tallaalada - Amjambo Africa
Kiisaska COVID-19 ayaa mar kale ku soo badanaya Maine sababtuna waa kala duwanaanshaha halista ah ee aadka u faafa. Isbitaalka Aaya sidoo kale sii kordhaya, dhimashadii COVID -na waxay bilaabeen inay sidoo kale kor u kacaan. Maineyaasha aan la tallaalin ayaa weli ah kuwa aan la ilaalin oo aad u nugul. Laakiin heerka tallaalka gobolka ayaa ka mid ah kuwa ugu sareeya dalka, oo ah 64.6% dadka u qalma illaa badhtamihii Ogosto. Iyo tijaabooyinka caafimaad, talalada Pfizer, Moderna, iyo Johnson iyo Johnson tallaalada ka dhanka ah COVID-19 ayaa mar kale la xaqiijiyay si looga ilaaliyo cudurada daran iyo dhimashada.
Dad badan ayaa ku qanacsan inay ogaadaan in saynisyahannada iyo dhakhaatiirtu aysan ku degdegin mid ka mid ah tallaabooyinka ku lug leh horumarinta tallaallada COVID-19.
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maine (DHHS) waxay iskaashi la sameysay 30 wakaaladood oo kala duwan si ay u abuurto Maine barnaamijkeeda cusub ee COVID-19, kaas oo ay maalgeliso dawladda. Barnaamijka dhexdiisa, wada-hawlgalayaasha bulshada maxalliga ah iyo guddi-hoosaadyada ayaa bixiya rugaha tallaalka ee soo-baxa, siiya gaadiid goobaha tallaalka, la kulma hoggaamiyeyaasha bulshada iyo xubnaha si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan faa’iidooyinka tallaalka COVID-19, bixinta waji-xidhka, gacmo nadiifiye, iyo dhaqan ahaan raashin ku habboon kuwa u baahan in la karantiiliyo ama la karantiilo haddii ay tijaabiyaan togan, oo ay helaan hoteello iyo guryo kale oo loogu talagalay kuwa u baahan inay si ammaan ah uga fogaadaan xubnaha qoyska.
Charles Mugabe, oo ka shaqeeya wacyigelinta caafimaadka ee Hay’adaha Katooliga ee Maine, ayaa ah shaqsi muhiim ah oo la shaqeeya Barnaamijka Kaalmada Bulshada ee Daryeelka Bulshada ee COVID-19. Tan iyo markii Hay’adaha Samafalka ee Katooliga ay u shaqaaleeyeen Mugabe inuu yahay Isku-duwaha Mashruuca COVID-19 bilowgii masiibada, wuxuu kasbaday sumcad uu ku yaqaan sida loo helo xubnaha bulshada ee aan la tallaalin kuwaas oo aan ku kalsoonayn tallaallada si ay uga fiirsadaan tallaalka, kuwaas oo dad badani leeyihiin. Wuxuu oggolaaday inuu la wadaago Amjambo Afrika wixii uu ku yiraahdo xubnaha bulshada ee ah tallaalada laga fekerayo in la tallaalo, kuwaas oo dad badani haystaan. Wuxuu oggolaaday inuu la wadaago Amjambo Afrika waxa uu ku leeyahay xubnaha bulshada ee tallaalka ka labalabeeya.
In kasta oo aan si rasmi ah loogu tababarin caafimaadka dadweynaha, haddana waayo -aragnimada nololeed ee Mugabe oo ah soo -galooti ka yimid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, afafkiisa badan, iyo macluumaadka uu ka bartay fasallada kalkaalinta ee uu hadda ka diiwaangashan yahay, ayaa haga shaqadiisa. Bishii Maajo 2021 oo keliya, Barnaamijka Taageerada Bulshadu wuxuu helay 84 tixraac oo loogu talagalay adeegyada dhaqan ahaan iyo luqad ahaan ku habboon.
In kasta oo DHHS aysan si sharci ah u ururin karin xogta xaaladda socdaalka ee tixraacayaasha, in ka badan rubuc ka mid ah dadka gala adeegyada kooxda ayaa sheegay inay ku hadlayaan luqad aan ahayn Ingiriisiga oo ah luqadda koowaad.
Ka hadalka sayniska si kor loogu qaado aqbalaadda tallaalka, Mugabe wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dadka oo dhami ay rabaan inay go’aanno xog -ogaal ah ka qaataan caafimaadkooda, iyadoon loo eegin heerka waxbarashada. Waxa uu sheegay in wadaagista cilmi baarista tallaalka kadib aaya waxtar leedahay. In la kala jaro sayniska iyo xogta qaybo la fahmi karo qofka shaqaalaha ah ayaa sidoo kale shaqeeya, ayuu yidhi. Wadahadalka uu dadka la yeesho, Mugabe wuxuu ka hadlayaa dhowr arrimood oo khuseeya tallaalka.
Walaacyadaas waxaa ka mid ah hannaanka horumarinta tallaalka. Wuxuu leeyahay dad badan ayaa ku qanacsan inay ogaadaan in saynisyahannada iyo dhakhaatiirtu aysan ku degdegin mid ka mid ah tillaabooyinka ku lug leh horumarinta tallaallada COVID-19. Si loo xaqiijiyo in tallaalladu amman yihiin, dawladda Maraykanku waxay u baahday soo -saareyaasha tallaalka inay socodsiiyaan saddex weji oo tijaabooyin caafimaad ah.
In ka badan 10,000 oo qof, oo jira 18 sano iyo ka weyn, oo ka kala yimid qowmiyado kala duwan, asal kala duwan, iyo xaalada caafimaad, ayaa si iskaa wax u qabso ah uga qayb qaatay tijaabooyinkan badbaadada. Ma jirin heerar koror ah oo wax yeelo halis ah ama dhimasho lagu arkay tijaabooyinka badbaadada. Sidoo kale, iyada oo ku saleysan tikniyoolajiyadda hidda -wadaha, talalada mRNA ma beddelaan DNA -da ama hidde -wadaha tallaalkada .
Saynisyahannadu waxay isticmaalo xogta laga helay tijaboyinka amiga si lo go aamiyo sida wanaagsan ee tallaaladu u shaqeeyaan. Tan waxaa lagu magacaabay waxtarka talalada. Qaar ka mid ah ka -qaybgalayaashii tijaabada bukaan -socodka ayaa helay placebo ama tallaal bannaan iyada oo aan la helin wax tallaal ah. Saynisyahannadu waxay markaa isbarbar dhigeen tirada dadka ku xanuunsaday kooxda la tallaalay iyo kuwa ku xanuunsaday kooxda placebo si loo go’aamiyo waxtarnimada tallaalka. Tusaale ahaan, haddii tallaalku 80% wax tar leeyahay, micnaheeda ma aha in uu shaqeeyo oo keliya 80% waqtiga. Halkii, waxay ka dhigan tahay in gudaha in koox dad la tallaalay ah, 80% dad ka yar ay heli doonaan COVID-19 marka ay la kulmaan fayraska.
Administration Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) aya ansixiya dawooyin iyo tallaallo cusub ka dib markay qiimeeyeen xogta ka timid , saddex waji oo ah tijaabooyinka badbaadada caafimaad. Sababtoo ah COVID-19 wuxuu abuuray xaalad deg-deg ah oo caafimaadka dadweynaha ah, dowladda Mareykanka waxay oggolaatay adeegsiga tallaallada Pfizer, Moderna, iyo Johnson iyo Johnson si loogu isticmaalo degdeg ah.
Guddi madaxbannaan oo saynisyahanno ah iyo khubaro caafimaad dadweyne (ma aha shaqaale dawladeed ama shaqaalaha soo -saarayaasha tallaalka) ayaa dib u eegay dhammaan xogta badbaadada caafimaadka hor intaan la ansixin adeegsiga tallaallada. FDA waxay hadda la socotaa malaayiin qof oo qaatay tallaalka waxyeellooyin kasta ama dhibaatooyin tallaal, waxaan la filayaa inay dhowaan soo saaraan oggolaansho.
In ka badan 351 milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka COVID-19 ayaa lagu bixiyey Maraykanka intii u dhexaysay Disembar 14, 2020, iyo Ogosto 9, 2021, iyada oo aanay jirin halis sii kordhaysa oo wax yello ama dhimasho ah. Mugabe wuxuu ku dhiirri -galiyaa xubnaha bulshada inay ka shakiyaan sheekooyinka warbaahinta bulshada ee ku saabsan waayo -aragnimada dadka shaqsiyeed ee waxyeellooyinka tallaalka. Taa bedelkeeda, wuxuu dadka ku dhiirrigeliyaa inay la hadlaan dhakhtarkooda haddii ay ka welwelsan yihiin badbaadada tallaalka iyo xaaladaha caafimaad ee shaqsiyeed.
In kasta oo ay kordheen tirada kiisaska labadii bilood ee la soo dhaafay, tallaallada Pfizer, Modern, iyo Johnson iyo Johnson ayaa ka shaqeynaya sidii dadka cudurka qaba looga ilaalin lahaa in isbitaal la dhigo oo ay dhintaan. Haddii aysan ahayn tallaallada, kiisasku waxay u badan tahay inay qarxaan, isbitaallada oo buux dhaafiyeen qeybaha daryeelka degdegga ah, iyo dhimashada dhimashada oo kor u kacda sidii aan aragnay xagaagii hore iyo dayrtii, haddana waxay ku arkeen goobo ay dadku ka yar yihiin tallaalka kiiska Maine. Taa bedelkeeda, maadaama Maine ay leedahay heer tallaal oo aad u sarreeya, dad tiro yar oo halkan jooga ayaa u xanuunsanaya sidii sanadkii hore.
Xaqiiqda ah in dadku ku bukoodaan COVID-19 micnaheedu ma aha in tallaalku uusan shaqaynayn. Dadka badankood ee xanuunada lama tallaalo.
Infekshin cusub ayaa dhacda haddii qof la tallaalay uu qaado COVID-19. Sida dhammaan tallaalada, tallaalada COVID-19 si buuxda uma ilaaliyaan qof walba, ilaalintiina way yaraan kartaa waqti ka dib. Fayrasyadu way isbeddelaan waqtiba, iyo kala duwanaanshaha delta ee fayraska SARS-CoV-2 wuu ka duwan yahay culeyska uu fayraska Moderna, Pfizer, iyo Johnson markii hore loogu talagalay inuu ka ilaaliyo.
Sikastaba ha’ahaatee, ilaa hadda tallaaladu waxay si fiican uga shaqeynayaan kala -duwanaanta delta, waxayna dadka badan kooda ka ilaali ayaan cudurada halista ah iyo dhimashada. Rasaasayaasha xoojinaya waxay u tababaraan jirka inuu aqoonsado kala duwanaanshaha cusub ee fayraska oo is difaaco. Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurada ee Maraykanka (CDC) ayaa dhawaan ku taliyay in kuwa ugu halista badan inay u dhintana caabuqa degdeg ah ay helaan tallaal xoojin ah.
Waqtigan xaadirka ah, CDC kuma talineynin dadka waaweyn ee caafimaadka qaba inay qaataan tallaallo xoojinaya. Mustaqbalka, dhakhaatiirtu waxay ku talin karaan in qof walba qaato tallaalada xoojinaya tallaalka Pfizer, Casriga, iyo Johnson iyo Johnson.
Wax ka qabashada xogta khaldan ee tallaalka
Badweynta macluumaadka is burinaya ee dadku ku arkaan baraha bulshada ayaa jahawareerisa kuwa ka warwareegaya in la tallaalo, ayuu yiri Mugabe.
Jahwareerku wuxuu u horseedi karaa kalsooni -darro xagga macluumaad ku salaysan cilmiga iyo aaminada khaldan ee wararka xanta ah ee aan la xaqiijin. WhatsApp waa astaanta koowa ee faafisa wararka khaldan. Mararka qaarkood waxaan dadka ku dhiirri -galiyan inay kaligood tagaan oo ay cilmi -baaris ku sameeyaan maxaa yeelay, hab ahaan, dhammaanteen waan xiiseyneynaa, sax? Si loo qanciyo xiisaha aan u qabno, waxaa muhiim ah in la sameeyo cilmi -baaris, lala tashado khubaro, ”ayuuyiri. Muganbe
“Laakiin dadkena, badankood waxay durba la kulmeen WhatsApp. … Taasi sax ma aha ilaha macluumaadka. Waxaan had iyo jeer isku dayaa inaan dadka u sheego taas, oo waxaan ku dhiirrigeliyaa inay si dhab ah u sameeyaan [qoto dheer] baaritaan iyaga u gaar ah. ”
Sheekooyinka shaqsiyeed waxay noqon karaan dhibco xog muhiim ayuu yiri —Mugabe shahay.
“Waa muhiim in sidoo kale la dhageyso sheekooyinka. … Haddii xogtu aad u cilmi badan tahay oo aad u murugsan tahay, dhagayso sheekooyinka. Raac waxay dadku leeyihiin. Halkaasna waxaad ka dooran kartaa waxaad rabto inaad tidhaahdo maxaa yeelay markaa waad garanaysaa waxa run ahaantii dhacaya. Ma jiro qof lacag la siinayo si uu uga sheekeeyo sheekadooda xanuunka badan. ” oo wuxuu leeyahay sheeko u gaar ah oo COVID-19 ah oo uu la wadaago, taas oo uu sameeyo. Sanadkii la soo dhaafay, wuxuu ku waayay saddex abtigiis fayraska dilaaga ah. “Waxaan u arkaa in wadaagista sheekadayda shaqsiyeed – taasi waa adag tahay. Ma jecli inaan taas la wadaago. Waxaan jeclahay inaan u murugoodo aniga oo u gaar ah. Laakiin mararka qaarkood, waxaan u arkaa inay aad waxtar u leedahay. Faransiiska, waxaan ku leenahay waaya -aragnimadu waa macallin weyn. Qaar ka mid ah dadka shakisan, ma beddeli doonaan maskaxdooda ilaa ay la kulmaan. Laakiin taasi waa laga yaabaa inay soo daahdo. ”
Raadi tilmaamo dhaqameed si kor loogu qaado aqbalaadda Wali Diintu waxay inta badan diyaar u yihiin inay is -tallaalaan markay ogadan in talaalka ilaalin doono odayaasha la ixtiraam ama caruurta yaryar ee la jecel yahay ammaan iyo caafimaad, ayuu yidhi Mugabe.
Iyada oo ay soo kordhayaan kala duwanaanshaha delta iyo la’aanta tallaalka COVID-19 ee la oggolaaday ee carruurta ka yar 12 sano, Mugabe wuxuu ka codsanayaa ixtiraamka dhaqankiisa carruurta iyo waayeelka. Rabitaanka ah inaad dib ugu laabato guriga si aad u aragto qoyska iyo saaxiibbada sidoo kale waa dhiirigelin muhiim ah. Dhawaan Mugabe wuxuu arkay kororka xubnaha bulshada ee u safraya guriga si loo aaso, ka dib markii ay sare u kacday dhimashada qaaradda Afrika marka loo eego kala duwanaanta delta. Dadka ku dhimanaya Afrika lama tal
Isagoo wajahaya kala duwanaanshaha delta
Marka uu la hadlayo xubnaha bulshada, Mugabe wuxuu xooga saarayaa sida wanaagsan ee tallaaladu u shaqeynayaan, isagoo tilmaamay Maine isbitaal dhigistiisa hoose iyo heerka dhimashada, xitaa iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska. Codsiyada Barnaamijka Taageerada Bulshada ee COVID-19 ee taageerooyinka bulshada ee la xiriira COVID-19 ayaa si isdaba joog ah marba marka ka dambaysa kor ugu sii kacayay, toddobaad ilaa toddobaad laga soo bilaabo badhtamihii bishii Luulyo, oo gaadhay 48 tixraac toddobaadkii ugu horreeyey ee Ogosto ka dib bishii Juun oo ahayd 12 kaliya. Isbeddelkan kor u kaca wuxuu ka walwalaa Mugabe, laakiin adkeysiga beeshiisa, rikoorka guusha ee barnaamijka Taageerada Bulshada ee COVID-19, iyo heerarka tallaalka Maine ayaa rajo wanaagsan ka siinaya cutubka xiga ee masiibada.
PreviousKhudrad Afrikaan ah oo cusub ayaa laga heli karaa halkan Maine!
NextWaxaa la cusbooneysiiyaa COVID-19 Delta kala